5 ama-pizza amahle okudla i-pizza yaseNeapolitan eMadrid | Izindaba Zokuhamba
5 ama-pizza amahle okudla i-pizza yaseNeapolitan eMadrid
Maria | | Impelasonto, Gastronomy
Kuyathakazelisa ukuthi ukudla okwakuzalelwe ukudambisa indlala yabantu ababencishwe amathuba kakhulu eNaples kweqe imingcele futhi kwaba ngesinye sezidlo ezidume kakhulu nezidumile emhlabeni: i-pizza.
Obunye bobufakazi bokuqala nge-pizza yaseNeapolitan butholakala ku-Alexander Dumas, umbhali we-'The Three Musketeers ', ngo-1830 owakhuluma ngokuhlukahluka kwakhe ngenkathi ehlala eNaples.
Kwaphela amashumi eminyaka, i-pizza yaseNeapolitan yahlala esifundeni kwaze kwaba isimangaliso sezomnotho sango-1960 sigqugquzela amaNeapolitans amancane ukuthi enze i-pizza ibe yingxenye yesiko likazwelonke lase-Italy negugu elizokhonjiswa emhlabeni wonke.
Akukaziwa ukuthi iresiphi yazalwa nini kodwa isiko lokugqoka isinkwa ngezithako ezahlukahlukene lalikhona emasikweni amaRoma nawase-Etruria. Mhlawumbe ukufika eYurophu kukatamatisi ngemuva kokutholakala kweMelika, ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX, kwaguqula indlela yokupheka lokhu kudla.
I-pizza yaseNeapolitan isanda kuqanjwa njengeGugu Elingaphatheki Lobuntu yi-UNESCO. ESpain, isitayela samaRoma sathandwa kakhulu, ngenhlama ezacile nencane, nokuyinto etholakala ezindaweni eziningi zokupheka i-pizza ngenkathi eyaseNeapolitan kunzima kakhulu ukuyithola. Ngalesi sizathu, ngezansi sizovakashela ezinye izikhungo eMadrid lapho unganambitha khona ama-pizza asezingeni eliphakeme we-Neapolitan.
2 I-Anema ne-Core
4 UGrosso Napoletano
5 Totto e Ikhukhamba
Abanikazi bale pizzeria kuCalle Ponzano 76 balethe imodeli yamaphiza aseNeapolitan, isitayela sase-Argentina, eMadrid. Ihlotshiswe ngobuhle bezimboni kanye nokungahleleki, le ndawo inehhavini elikhulu elenziwe ngokhuni laseSpain lapho kuphekwa khona izinhlobo eziyishumi nane ze-pizza ejiyile nefudumele okuthi, uma unikezwe usayizi wazo, ondle okungenani abantu ababili.
KwaPicsa unga-oda ama-pizza ngohhafu, izingxenye eziphelele noma ezingazodwana. Inhlama elula, ayisindi nakancane, enongqimba lweshizi ezintathu lapho kubekwa khona izithako ezisele.
I-Alma y Corazón noma i-Anema y Core, iyindawo yokudlela yase-Neapolitan pizzeria etholakala kude ne-erapera (Calle Donados 2) eseyindawo enhle kakhulu yokunambitha ama-pizza enkabeni yenhloko-dolobha.
Isihluthulelo sempumelelo yama-pizza ka-Anema e Core yihhavini lamatshe laseSorrento elethwe ngokusobala livela eNaples nangesikhathi sokuphumula okufanele ukuthi abe ne-pizza. Yize kunezinhlobonhlobo eziningi kwimenyu, ezingaphezu kweshumi nambili, mhlawumbe okumnandi kunakho konke kulula kakhulu. Ngakho-ke, okunye okunconywe kakhulu kule pizzeria yiMargarita, eyenziwe nge-arugula, utamatisi wemvelo kanye nenyathi eyi-mozzarella enegama lendabuko. Imnandi nje.
Ku-76 ModestoLafuente street sithola iRegellaella, isikhungo sase-Italy lapho kwenziwa khona ama-pizza wesitayela sendabuko ngehhavini elishiswa ngokhuni. Inhlama yenziwa ngofulawa kakolweni ku-pizzeria uqobo nsuku zonke ukuthola ama-pizza amnandi aseNeapolitan futhi alungile.
I-Reginella inemenyu ehlukahlukene futhi ebanzi lapho inezinto ezihlala zihleli futhi ezinye eziphekwa njalo ngenyanga ngaphandle kwemenyu. Ngenxa yalokhu baletha izithako ezivela ngqo e-Italy ezifana nesoseji yeNeapolitan, mozarella, basil noma utamatisi omnandi waseCampania. Esinye isizathu sokuvakasha ngokushesha inyanga ngayinye kule ndawo.
IMadrid ingajabulela kabili ama-pizza aseNeapolitan nophawu lweGrosso Napoletano ngenxa yama-pizza abanikazi bawo abanawo eCalle Santa Engracia 48 naseCalle Hermosilla 85. Futhi bavule ngonyaka odlule kuphela.
Ohhavini baseGrosso Napoletano balethwe ngqo bevela eNaples ukuzonikela nge-pizza ejiyile, esikahle ngohlobo lwe-oo, uhlobo lwenhlama efulawa kabili. Ama-pizza abo aphekwa ngo-500ºC umzuzu nohhafu futhi imenyu yabo ayinakuba ngaphandle kukaMargarita noma uGrosso, okukhethekile kwendlu.
Njengokulangazelela, banenkonzo yokulethwa emakhaya futhi bangabuye bayalwe ukuthi baqoqe endaweni bese begoduka.
Totto e Ikhukhamba
Abazalwane ababili baseNeapolitan bavule iTottò e Pepino ngenhloso yokunikeza ukudla kwangempela kweNeapolitan eMadrid. Indawo yabo yabhabhadiswa ngegama lombhangqwana odumile wosomahlaya base-Italy futhi bekungeke kuphumelele kakhulu ngoba kuyiphathi lapho kugujwa khona ukudla kwase-Italy futhi ikakhulukazi i-pizza.
Eqinisweni, okwamanje banenye yezipho ezinkulu kakhulu ze-pizza zaseNeapolitan eMadrid ezinama-30 ahlukene. Kusuka kuMargarita wendabuko kuya kucalzone (okugxishiwe) noma ama-pizza othosiwe, isibiliboco esithandwa kakhulu eNaples. Abathandi be-pizza baseNeapolitan bangathola le ndawo yokudlela eCalle Fernando VI 29.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Gastronomy » 5 ama-pizza amahle okudla i-pizza yaseNeapolitan eMadrid
5 amahostela eParis
Amagugu Omhlaba wonke ayigugu kakhulu kubahambi